खाेजमुलक लेख : हिन्दु परम्परासंग जाेडिएका १० बैज्ञानिक कारणहरु-Nagarikaawaj.com
घरअगाडि मठमा तुलसी किन रोपिन्छ ?
पुर्वीय दर्शनमा आधारित हाम्रो हिन्दु धर्म र परम्पराको स्थापना प्राचीन हाम्रा ऋषिमुनिहरुले गरेका हुन, जसलाई प्राचीन युगका बैज्ञानिक भनिन्छ ।
उत्कृष्ट कारणसहित स्थापना गरिएका हिन्दु परम्परा जसका पछाडि बैज्ञानिक चिन्तन र कारणहरु छन् र ती परम्परा हाम्रो पुस्तादेखि पुस्तासम्म परम्पराकै रुपमा हस्तान्तरण हुँदै आएका छन् ।
हाम्रो हिन्दु परम्पराका पछाडि रहेका कारण र रहस्य हामी धेरैलाई थाहा छैन तर पनि हामीले हाम्रो परम्परा सम्झी आफ्नो जीवन र जीवनशैलीमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौ।
यहाँ केही हिन्दु परम्परा र त्यसको पछाडिको बैज्ञानिक कारण र महत्व यस प्रकार छन् :
१) घरको अगाडि मठमा तुलसी किन रोपिन्छ ?
हरेक हिन्दुहरुको घर अगाडि अनिवार्य रुपमा मठ बनाएर तुलसीको विरुवा रोपिन्छ र तुलसीको पुजा पनि गरिन्छ यसको पछाडि बैज्ञानिक कारण छ । तुलसीबाट निस्कने हावा, ग्याँसले ओजन तहलाई सन्तुलित राख्दछ । अक्सिन प्रवाह गर्दछ र पृथ्वीको वातावरणलाई सन्तुलित गर्ने कार्य गर्दछ ।
विश्व ओजन डे १६ सेप्टेम्बरमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदा केही वातावरण सम्बन्धी संस्थाले ठूलो मात्रामा तुलसीको विरुवा वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यस बाहेक तुलसीको पात औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
आयुर्वेद विज्ञान अनुसार पनि यो धेरै महत्वपूर्ण छ । तुलसीको पात प्राय ज्वरो आउँदा सामान्य ठण्डी हुँदा कफ आउँदा र जिब्रोमा समस्या आउँदा औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
२) पैसाको सिक्का नदीमा किन फाल्छौं ? तामाको भाडो अथवा गाग्रीमा खानेपानी किन प्रयोग गर्छौ ?
पहिले पहिले तामाको सिक्का नै चलन चल्तीमा थियो । अहिलेको मिश्रित धातुको सिक्का थिएन । तामाको धातुले पानीलाई सुद्धिकरण गर्छ । नदीहरु खानेपानीका मुहान हुन ।
तर हामीले पितृ उद्धारको लागि नदीमा सिक्का फाल्छौं । उदेश्य जे भए पनि तामाको रासायनले पानीलाई शुद्ध बनाउँछ । हामी घरमा संकलन गरेको खानेपानी तामाको भाडामा राख्ने जुन प्रचलन छ ।
तामामा रहेको पानी खानेपानी उच्चस्तरको शुद्ध हुन्छ किनकी यहाँ तामाको रासायनले पानीलाई शुद्ध बनाउँछ त्यसैले छोरीको विवाहमा पनि तामाको गाग्री ताउला दिने चलन छ । ताकि विवाह पश्चात पनि छोरीले घर मा गएर शुद्ध खानेपानी प्रयोग गरुन ।
३) नमस्कार किन गर्छौ ?
हामी हिन्दुहरु एक आपसमा भेट हुँदा दुई हातको पंजा जोडेर नमस्कार गर्छौ । हाम्रो परम्परा अनुसार नमस्कार गर्नु एक अर्काप्रति आदरभाव प्रकट गर्नु हो ।
नमस्कार गर्दाको बैज्ञानिक कारण जव दुवै हातका औलाहरु एक आपसमा जोडेर नमस्कारको अवस्थामा रहन्छन त्यसबेला आँखा नाक कान मष्तिस्कको प्रेशर विन्दुलाई क्रृयाशिल गराउँछन् जसले गर्दा धेरै बर्षपछि भेट भएको मित्रलाई पनि सजिलै चिन्न सक्ने स्मरण शक्तिको उर्जा प्रवाह गर्दछ ।
४) निधारमा टिका किन लगाइन्छ ?
हाम्रो निधारमा दुवै आँखाको विचमा टिका लगाउँछौ हामी मठ मन्दिर जाँदा पूजा गर्दा आस्थाका आधारमा टिका लगाउँछौं । दिदीबहिनीहरु सौन्दर्यका लागि पनि रातो टिका लगाउँछन र यसको बैज्ञानिक पक्ष निधारको दुई आँखाको विचमा रातो टिका लगाउँदा हाम्रो शरीरलाई चाहिने शक्ति क्षय हुनबाट जोगाउँछ ।
टिका लगाउँदा पनि दुई आँखाको बीच भाग जसलाई भृकुटी भनिन्छ । आफ्नै भृकुटीमा एकछिन हे¥यौ भने पनि त्यसले मनलाई एकाग्रता प्रधान गर्र्दै सकारात्मक सोच दिन थाल्दछ र शरीरमा रक्त सञ्चार भै मांसपेशीलाई पनि मजबुट बनाउँछ ।
५) मन्दिरमा घण्ट किन बजाइन्छ ?
हामी मन्दिर वा पूजा कोठामा श्रद्धापूर्वक घण्टी बजाउँछौं यसको बैज्ञानिक कारण छ । घण्ट जुन धातुबाट बनेको हुन्छ त्यसलाई बजाउँदा जुन आवाज उत्पादन गर्दछ ।
जसले हाम्रो मष्तिस्कको देब्रे र दाहिने दुवै भागलाई एकिकृत गर्दछ । एक पटक घण्टी बज्दा कम्तिमा ७ सेकेण्ड बातावरणलाई परिवर्तन गरी दिन्छ र हाम्रो शरिरमा रहेका ७ वटा इन्द्रियलाई क्रियाशिल गराउँदछ ।
जसको कारण हाम्रो मष्तिस्कमा भएको नकारात्मक सोचलाई पुरै नष्ट गरेर पूर्ण रुपमा सकारात्मक सोच गरिदिन्छ ।
६) दशै तिहारमा घर किन सिंगार्छौं ?
हिन्दु परम्परा अनुसार हामी दशै तिहारलाई हामीले ठूलो चाडवाडको रुपमा मनाउँदै आईरहेका छौं । साथै आफ्नो घरलाई पनि मर्मत तथा रंगरोगन गर्दछौं ।
साथै दशै तिहारमा नयाँ लुगा पनि किन्ने गर्दछौं । यसको पछाडि बैज्ञानिक कारण के छ भने दशै तिहार अगाडि बर्षा ऋतु भएको र बर्षाको पानीले हाम्रो घर आगन बाटो घाटो विगारी दुर्गन्धित भएको हुन्छ । एक त बर्षापछि वातावरण सफा राख्न हामी घर आँगन बाटोघाटो सफा गर्दछौं ।
भने अर्को तर्फ दशै तिहार पछि मौसम परिवर्तन भै जाडो मौसम शुरु हुने हुँदा आगामी मौसमको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि हामी घर मर्मत तथा रंग रोगन र नयाँ लुगा लिने गर्दछौं ।
७) बच्चाको कान किन छेडिन्छ ?
हिन्दु परम्पराअनुसार बच्चा जन्मेपछि १ बर्षभित्रमै दुवै कान छेडिन्छ । यसको बैज्ञानिक कारण चाहि एकुपञ्चर उपचार विधि हो यो विधि प्रयोग गर्दा बच्चाहरु स्वस्थ रहन्छन भन्ने हाम्रो परम्परा छ । एकुपञ्चर उपचार विधि हिन्दु परम्पराको प्राचीन विधि हो ।
यसको विकसितरुपमा अहिले यसलाई चाइनिजहरुले उपचारको विधिको रुपमा आधुनिक युगमा प्रयोग गर्दछन् । कानको जुन विन्दुमा छेडिन्छ ।
उपचारको क्रममा यही विधिले छिटो सञ्चो हुने कार्य गर्दछ । दिदीबहिनीहरुले लगाउने धातुको रिङ्गले पनि पृथ्वीको वातावरण र शरिरको आवश्यकतालाई सन्तुलित राख्दछ । विषेशतः चाँदीको गहना अति उत्तम मानिन्छ ।
८) उत्तर टाउको गरेर किन सुत्नु हुन्न ?
मृत्यु पश्चात चितामा उत्तर टाउको गरेर राखिन्छ तर जीवित अवस्थामा उत्तर टाउको गरेर सुत्नु हँुदैन भन्ने हाम्रो परम्परा छ यसको वैज्ञानिक कारण अनुसार हाम्रो शरिर ह्रदय भएको चुम्बकीय वस्तु हो ।
जसले रक्त सञ्चार गर्दछ । पृथ्वी र शरिरबीचको चुम्बकिय सन्तुलन राख्न पनि उत्तर दिशा टाउको गरेर सुत्नु हुदैन ।
उत्तर दिशा पृथ्वीको चुम्बकिय क्षेत्र हो । उत्तर दिशा सुतेमा पृथ्वीको चुम्बकिय क्षेत्रको असरले टाउको दुख्ने ब्लड प्रेशर बढ्ने हुँदा हाम्रो मुटुलाई शरिरको सन्तुलन राख्न धेरै कठिनाई हुन्छ ।
९) ढोग गर्दा चरण स्पर्श किन गरिन्छ ?
साधारतया हामी आफुभन्दा ठूला बडा वा बाबुआमालाई ढोग गर्दा चरणस्पर्श गर्दछौं । यसलाई हामीले आदर र सम्मान पुर्वक गरिएको भेटको रुपमा लिन्छौं । तर यसको बैज्ञानिक कारण जव तपाई कसैको चरणस्पर्श गरेर ढोग गर्नुहुन्छ तपाईलाई उताबाट आशिर्वाद प्राप्त हुन्छ ।
जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिसंग कुनै इगो भए पनि यस स्पर्शले दुवैजनाको आँखा आँखको हेराइले इगोलाई नष्ट गरिदिन्छ तपाईप्रति उसको सकारात्मक सोचको उर्जा प्रवाह हुन्छ जसलाई करुणा भनिन्छ दुवैजनाको मष्तिस्क र सोचमा सकारात्मक सोचको प्रवाह हुन्छ ।
१०) मुर्तिपूजा किन गरिन्छ ?
हिन्दूहरुले आध्यात्मिक शक्तिको प्राप्तिको लागि प्रार्थना एवम् पूजा गर्दा भगवानको मूर्तिमा पूजा गर्दछौं जसबाट हामीमा आत्मा शान्ति र सकारात्मक सोचको प्रवाह हुन्छ यसको पछाडि पनि बैज्ञानिक कारण छ । जव तपाई एकचित्त भएर पूजा ध्यान प्रार्थना गर्नुहुन्छ । त्यसबेला तपाईको अगाडि धेरै कुराहरु हुन्छन् ।
सवै वस्तुलाई हेरेर ध्यान केन्द्रित हुदैन कुनै एक चिजलाई हेरेर ध्यान केन्द्रित गर्दा आध्यात्मिक शक्ति आर्जन हुन्छ । त्यसैले हामी मूर्तिपूजा गर्दछौं र त्यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी आध्यात्मिक शक्ति आर्जन गर्दछौं ।
शर्माले नागरिक आवाजका लागि तयार पारेका सम्बन्धित लेखहरु :
सरसफाई र हरियाली बनाउने डिल्लीप्रसादको यस्तो छ भिजन
रिसनको खेल महोत्सब सम्पन्न
तिलोत्तमा गोल्डकप २१ औं संस्करण : उद्घाटन खेलमा झापा– ११ विजयी
शहिद स्मृति कप : सुनौलो संगम युवा क्लब विजयी
चौथौ लुम्बिनी जिल्ला स्तरीय अन्तरमावि तेक्वान्दो प्रतियोगिता
परिवार नियोजन संघको केन्द्रिय कार्यसमितिलाई बुटवलमा स्वागत तथा सम्मान